प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाल बितेको आज वर्ष पुग्यो ! यस्ता छन् उनका केहि दुर्लभ तस्वीरहरु ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
प्रकाशित मिति : सोमवार, मंसिर ३, २०७५
नेपालको पुर्व-प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पुत्र प्रकाश दाहालको गत वर्ष मङ्सिर ३ गेट यस संसारबाट स्वर्गारोहण भएका थिए ।पछिल्लो समय प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहाल विभिन्न विषयका विवादमा परी चर्को आलोचनामा पर्ने गरेका थिए ।
माओवादीको जनआन्दोलन शान्ति प्रक्रियामा गएर टुंगिएपछि उनका केही काण्डहरुका कारण विवादका विषय बनेका थिए। प्रचण्डपुत्र प्रकाश विवादमा मात्रै परेका थिएनन , उनले देशका केही योगदान पनि गरेका छन्। उनी आफ्नै पिता प्रचण्डले चलाएको सशस्त्र जनआन्दोलनमा लडाकु भई युद्दभुमिमा होमिएका थिए।
उनी सशस्त्र जनआन्दोलनको समय हतियार बोकी युद्दमा निडरका साथ होमिने गर्थे। माओवादीको सशस्त्र जनआन्दोलनको समयमा र अरु विभिन्न समयमा कैद गरिएका प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालका केही दुर्लभ तस्वीरहरु यस्ता छन्।